•एचआईभी जोखिम:सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ | Home
Posted on December 6, 2009 by Yonepal	दुर्घटनावश एचआईभी सर्न सक्ने जोखिमपूर्ण व्यवहारमा परिसकेपछि के गर्ने ? संक्रमण हुन नदिन के गर्ने ? उत्तर पाउन गारो भए पनि चिकित्सकहरू ‘पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस (पीईपी)’ को शरणमा गए केही हदसम्म संक्रमणबाट बच्न सकिने बताउँछन् । दुर्घटनावश एचआईभी सर्न सक्ने जोखिमपूर्ण व्यवहारमा परेर हाल पूर्ण निरोग रहेका व्यक्ति हाम्रो मुलुकमै थुप्रै छन् । उपत्यकामा केही वर्षयता पीईपी सेवा लिनेहरूको संख्यामा वृद्घि देखिएको छ । तर पीईपीबारे जनमानसमा जानकारी नरहेको चिकित्सक र एचआईभी संक्रमितहरू नै स्वीकार्छन् ।
उच्च जोखिम समूहअन्तर्गत दुई प्रकारले उपचार गरिन्छ । न्यून जोखिममा दुईथरीका औषधिमात्र खानुपर्छ । यस प्रक्रियामा औषधि खर्च भने डेढ हजारदेखि दुई हजारमात्र हुने गरेको छ । व्यवहारमा भने चिकित्सकहरूले दुईथरीका औषधि त्यति चलाएको देखिँदैन । उच्च जोखिम देखिनेले तीन थरीका औषधि एक महिनासम्म सेवन गर्नुपर्छ । यसमा भने उपचार खर्च ९ हजारदेखि १३ हजारसम्म पर्छ ।
Filed under: Headlines « कोइराला ब्रान्ड छोराछोरीसँग खुला यौन छलफल गर्नुस् ! »